यस्तो हुन्छ बुधबार जन्मिएका मानिसहरूको स्वभाव ! जानीराखौ – Nepal Trending
यस्तो हुन्छ बुधबार जन्मिएका मानिसहरूको स्वभाव ! जानीराखौ
काठमाडौँ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार मानिसको चालचलन, व्यावहारलगायत अन्य गतिविधि मानिस जन्मेको जन्मबार, महिना र समयले निर्धारण गरेको हुन्छ । को मान्छे कुन बार र कति बेला जन्मेका हो उक्त साइतले उसको स्वाभाव र चरित्र निर्धारण गर्ने ज्योतिषहरुले बताउने गरेका छन् । यस्ता छन् बुधबार जन्मेका मान्छेहरुको स्वभावः
बुधबार जन्मेका व्यक्तिहरु शान्त, विदुषी, सफा र स्वच्छ विचारधाराका मालिक तथा विजनेश माइन्डका हुने गर्दछन् । नयाँ–नयाँ कुराहरु जान्न निकै मनगर्ने भएकोले आफ्नो काम निकै वस्थित तरिकाले गर्न चाहन्छन् । राम्रो कुरा गर्ने तरिका र सकारात्मक सोचसँगै जीवनमा धेरै अघि बढ्ने गर्नाले निकै सफलता हात पार्छन् ।
उनीहरु खर्चिलो स्वाभावको हुन्छन र आफ्नो निर्णय आफैँ लिन्छन् । धेरै रिस त उठ्दैन तर एकचोटी रिसाइसके पछि उठेको रिसलाई शान्त पर्न निकै समय लाग्ने गर्दछ । कुनै पनि कुरामा त्यति तनावमा नहुने भएका कारण यिनीहरुको जीवन निकै सन्तुष्ट हुन्छ ।
कसैलाई पनि सजिलै माफी दिँदैनन् । कुनै पनि व्यक्ति एक पटक मन नपरेमा ती व्यक्तिहरुले जे गरे पनि उनीहरुलाई प्रभावित तुल्याउन सक्दैनन् उनीहरुको वैवाहिक जीवन निकै सुखी हुन्छ र उनीहरुले आफ्नो पार्टनरको निकै हेरविचार गर्छन् ।